Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiim Fiqi oo ka hadley heshiiskii ay wada gareen Dhigiisa Dalka Turkiga – idalenews.com
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiim Fiqi oo ka hadley heshiiskii ay wada gareen Dhigiisa Dalka Turkiga
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa waxa uu faah faahin ka bixiyay heshiiskii uu la gaaray dhigiisa dalka Turkiga, oo ku saabsanaa dhismaha ciidamada qalabka sida ee Somaliya.
Wasiirka gaashaandhiga Fiqi ayaa hadalkiisa ku daray in heshiiskan uu ku saabsan yahay sidii loo tayen lahaa ciidamada xooga dalka Somaliya, isla markaana tababar ay u helilahaayeen Ciidamada milateriga.
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa heshiiskan iyo tababaradaan loo sameynaayo Ciidamada Milatariga Somaliya waxa uu Sheegay in qeyb weyn ka qaadan doonto dib u dhiska ciidamada Xooga Dalka Somaliya.
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya ayaa waxa uu yiri asagoo hadalkiisa sii wata waxaa tawabar loo sameyn doonaa saraakiisha ciidamada kuwaa oo lagu tawabari doono kuliyadaha Ciidamada ee ku yaala dalka Turkiga waxaana lasoo bari doonaa qeybaha milateriga .
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo ka warbixinaayo heshiiskii uu lasoo galay wasiirka Gaashaandhiga Dalka Turkiya ayaa waxa uu yiri tawabar ayaa looga furi doonaa kulyadaha ciidamada ee kuyaala dalka Turkiga waxaana lasoo bari doonaa qeybaha istiraatiijiyada dagaalka, qariiradaha, iyo dhaqtarnimo,si buu yiri wasiirka ay Ciidamada awood ugu yeeshaan dhinac walba,ayna ulahaanlahaayeen wood buuxda oo dhinaca ciidamada ah.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskan uu dhaqan geli doono marka ay ansixiyaan baarlamaanada labada dal, isagoo tilmaamay inuu dhowaan horgeyn doono baarlamaanka Soomaaliya si ay u ansixiyaan.
Wasiirka Gaashaandhiga C/xakiin Fiqi ayaa ka mid ahaa wafdigii uu horkacayay Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya ee booqashada ku tagay Dalka Turkiga, isla markaana shalay dalka dib ugu soo laabtay Dalka.
Daawo: Dood Xiiso Badan oo ku saabsan Cunaqabateynta hubka in la qaado iyo in kale
Madaxweynaha Masar Mohamed Morsi oo ka noqdey wareegtadii awooddaha dalka kula wareegay